Ihe ịma aka 5 nke Ọrụ Ndị Ahịa (na Otu esi edozi ha) | Martech Zone
Fraịde, Septemba 22, 2017 Douglas Karr
A ka nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị kwenyere na ndị ahịa na ịre ahịa bụ ọrụ dị iche iche n'ime nzukọ ahụ. O di nwute, ngalaba abụọ a na-adighi agha agha na otu nzukọ. Ọrụ ndị ahịa ugbu a nwere ihe ọha na eze nke nwere ike imetụta - ma mebie - aha ụlọ ọrụ, na-emebi ọganihu nke ndị ahịa na-eme.
N'agbanyeghị mgbanwe dijitalụ na-ewere ọrụ na ngalaba ndị ahịa, inye nnukwu ahụmịhe ndị ahịa na-anọgide na-adị mkpa maka azụmaahịa gafee ụlọ ọrụ dị iche iche. Ndị a bụ nsogbu ịma aka ndị ahịa na-arụ taa na otu ị ga - esi dozie ha iji nye ahụmịhe ndị ahịa dị egwu.
Ụlọ ọrụ dị ka Dell, onye ahịa, mee ya nke ọma, na-enye ndị ọrụ ọ bụla ọzụzụ otu esi etinye usoro mgbasa ozi na ọrụ ha yana ịnye ndị ahịa ihe ahịa ha nwere ike ịkọwa arịrịọ ọha na eze. Usoro a na-eme ka a mata na a na-edozi ndị ahịa ọfụma n'agbanyeghị onye ha na-agwa okwu na ebe mkparịta ụka a na-eme.
Ọzụzụ Sparkle mepụtara infographic a, ndị Ihe ịma aka ise dị elu nke ndị ahịa nke 5 na ihe ị ga-eme banyere ha.
Nhazi nke Njem Ndị Ahịa - ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị ahazi mmekọrịta ndị ahịa ha, na-ebute ọnụ ọgụgụ dị elu, na-eme ka afọ ojuju ndị ahịa belata, ma belata iguzosi ike n'ihe.
Inwe echiche zuru oke banyere onye Ahịa - ọ bụrụ na ndị ọrụ gị nwere ohere ịnweta ozi dị oke mkpa gbasara atụmanya na ire ahịa, ha nwere ohere ka mma imechi nkwekọrịta ahụ ma ọ bụ opekata mpe na-enyere onye ahụ aka ma na-ahapụ echiche echefu echefu.
Gbaa mbọ hụ na arụmọrụ arụmọrụ - systemhazi usoro na usoro dị irè maka mmekọrịta ọ bụla nke ndị ahịa dị oke mkpa. Nke a choro ka usoro na usoro obula gha emezi ma hazie oge.
Leveraging Dị Iche Iche Ahịa Aka - ndị ahịa ugbu a nwere nhọrọ ịmekọrịta ụdị site na ọwa dị iche iche dịka email, ederede, oku, nkata, na mgbasa ozi mmekọrịta. Jide n'aka na ị na-enye ha.
Itinye aka na onye ahịa ghasịrị - Ihe ndị ahịa na-atụ anya dị elu karịa mgbe ọ bụla ma ọ dị oke egwu na ndị nnọchi anya ndị ahịa gị nwere ikike, ọsọ, na nnwere onwe iji hụ na ndị ahịa na-emechu ihu ghọrọ onye nwere obi ụtọ.
Ọ bụ ezie na ihe ịma aka ise a na-ada ụda dị mfe, ha nwere ike were ọtụtụ afọ iji jikọta mmetụ ndị ahịa n'oge ozugbo site na sistemụ mmekọrịta ndị ahịa gị wee nye ndị ahịa gị, ahịa gị na ndị ọrụ ndị ahịa ihe ọmụma ha chọrọ.
Tags: ọrụ ndị ahịa iweọjọọ ahịa ọrụCRMNdị ọrụ nlekọta ndị ahịansogbu ịma aka ndị ahịandị ahịa na-elesparkle ọzụzụmetụ isilee onye ahịa